Nhau - Yakazara otomatiki Fibha Laser Tube Kucheka Muchina Solution YeMoto Pipeipi MuKorea
Fully Automatic Fiber Laser Tube Cutting Machine Solution For Fire Mapaipi In Korea
Yakazara otomatiki Fibha Laser Tube Kucheka Muchina Solution Kune Moto Pipeipi MuKorea
Nengano kumhanyisa yaivakwa mumaguta akangwara munzvimbo dzakasiyana-siyana, tsika moto kudzivirirwa havagoni kusangana moto kudzivirira zvinodiwa ngwara maguta, uye vakangwara moto kuchengetedzwa kuti zvakazara utilizes Indaneti zvinhu zvigadzirwa kusangana "kushandisa michina" zvinodiwa kudzivirira moto uye masimba akaita ranyuka. Kuvakwa akangwara moto kudzivirirwa akagamuchira kutarisirwa uye rutsigiro rukuru kubva nyika kusvika nzvimbo uye madhipatimendi.
Fire kuchengeteka kuvaka iri pamusoro vose. Nokuti kuvakwa mumaguta vakachenjera, moto kuchengeteka kuvaka chinhu pokutanga. Sei kuvaka akachenjera moto chengetedzo hurongwa kuti ndikwane kukura mumaguta akangwara idambudziko kuti mamaneja guta vanofanira kufunga.
Sezvo tichiziva zvose, kana uri akazochena moto kudzivirira indasitiri kana chinyakare moto kuchengetedzwa maindasitiri, rinokosha chezvinonhuwira yose moto kudzivirira hurongwa ndiwo moto dziviriro Mapaipi.
Customer Zvinodiwa: Laser chokuguma uye vakatema pamusoro sepombi.
Yedu Solution: Yakawedzera yekumaka system pane otomatiki bundle loader kuti upedze kutara pamachubhu usati wadimbura.
Sezvo moto dziviriro Mapaipi anogara mune imwe kunofambira mberi mamiriro, kuti Mapaipi zvinodiwa yakasimba, uye Mapaipi zvinodiwa kukurira kumanikidzwa, ngura kuzvidzivirira uye yakakwirira tembiricha nemishonga. Yaiwanzoshandiswa moto mutopota zvinhu vari: spheroidal mvura kukandira simbi mutopota, mhangura mutopota, Stainless simbi mutopota, chiwanikwa mutopota, slotted, chibhakera etc.
P2060A ari nyanzvi zvokushandisa achicheka pombi. Hunodzurwa pane imwe nguva uye ane yakakwirira mwero kushandisa michina, iyo inovandudzika zvikuru kugadzirwa kunyatsoshanda.
Muna firefighting chinhu, moto inokosha ukabvisa Zvivako moto sprinkler yezvinhu zvinofanira rinoumbwa pre-akagadzira mutopota, kusanduka vadyi, welded nzira yokubudisa Fittings uye musoro sprinkler, uye organically pamwe cheka, punching uye Welding kuita basa rayo yepakutanga.
P2060A otomatiki Laser mutopota nokuveza muchina uri mukuru-kuguma Laser nokuveza chubhu chaiyo michina. Zviri nyore kuti ishande, zvikuru zvoga, zvikuru zvinonyatsochengeta nokuveza, uye dzakashandisa zvinodiwa pamwero mukuru maindasitiri kugadzirwa uye vazhinji nevamwe akura features, achiva kusarudza kuti midziyo chubhu kubudiswa indasitiri wokutanga. The chigadzirwa yave serialized kusangana dzakasiyana-siyana yakasiyana nokuveza uye vachidzikisa urefu uye nokuveza zvinodiwa kuti zvakasiyana mutopota diameters, richipa basa munhu zvichienderana vakawanda vanoshandisa mumoto kudzivirira munda.
The simbi Laser mutopota aricheke anogona kuita chengarava nokuveza nenyere pasi nokuveza pamusoro simbi pombi. Zvinogona kucheka zvakananga kumativi akaita sepombi simbi sepombi, sepombi dzemhangura, aruminiyamu sepombi, Stainless simbi maindasitiri sepombi, etc .; kumativi chubhu paburi nokuveza, kumativi chubhu slotting, kumativi chubhu punching, vakakomberedza chubhu kuzvicheka muenzaniso etc.
Golden Laser chubhu nokuveza muchina yakazokudziridzwa muna 2012, muna December 2013 yakatarwa rokutanga YAG chubhu nokuveza muchina yaitengeswa. Muna 2014, kuti chubhu nokuveza muchina vakapinda mumba kugwinya / yokurovedza muviri michina indasitiri. Muna 2015, vakawanda internet Laser chubhu nokuveza michina zvakagadzirwa uye kushandiswa maindasitiri akasiyana-siyana. Uye ikozvino tiri nguva dzose kuvandudzika uye upgrading ari chubhu nokuveza muchina unongotaura.
P2060A 3000w Machine technical Parameter
Model nhamba P2060A
Tube / Pipe mhando kumativi, mativi mana akaenzana, rectangular, denderedzwa, Ob-mhando, D-mhando, Triangle, etc;
Tube / Pipe mhando angled simbi, gwara simbi, H-chimiro simbi, L-chimiro simbi, simbi bhendi, etc (nokuti pfungwa)
Tube / Pipe urefu Max 6m
Tube / Pipe saizi 20mm-200mm
Tube / Pipe vachizvitakudza uremu Max 25kg / m
chiputu kukura Max 800mm * 800mm * 6000mm
chiputu uremu Mota 2500kg
Dzokorora nzvimbo kunyatsoita + 0.03mm
Position kunyatsoita + 0.05mm
Internet Laser mabviro 3000W
Position havukavu Max 90m / Maminitsi
Chuck tenderera nokukurumidza Max 105r / Maminitsi
Cut Yechipiri 1g
kwakajeka urongwa Solidworks, Pro / e, UG, IGS
Electric simba zvitengeswa AC380V 60Hz 3P
Total simba rakawanda 32KW
P2060A Machine Cutting Zvandakashanda kuratidzira
P2060A Machine In The Korea Customer wacho Factory
P2060A Machine For Kucheka Fire Mapaipi Demo Video